Ngilungisa kanjani i-msvcr71 DLL ilahlekile? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > I-Mymc msvcr71.dll ilahlekile - ungayifeza kanjani
I-Mymc msvcr71.dll ilahlekile - ungayifeza kanjani
Ngilungisa kanjani i-msvcr71 DLL ilahlekile?
Ungakwenza kanjaniLungisa i-Msvcr71. njllAmaphutha
Qalisa ukuskena igciwane / i-malware yohlelo lwakho lonke.
Phinda ufake uhlelo olusebenzisa ifayela le-umagazine.
Sesha ikhompyutha yakho ukutholaumagazine.
Hlela irejista yeWindows uma imininingwane yakho ye-umagazine.
Landa ifayela le-umagazine.
Sebenzisa Ukubuyiselwa Kwesistimu ukulungisa izinguquko zesistimu yakamuva.
Ngilanda kanjani i-msvcr71 DLL?
Kopisha 'Msvcr71.njll 'umtapo wolwazi owukhiphile futhi wawunamathisela enkombeni ' C: \_ Windows \_ System32 '. Uma uhlelo lwakho lokusebenza lunokwakhiwa okungu-64 Bit, kopisha 'Msvcr71.njll 'umtapo wezincwadi bese ukunamathisela futhi ku - ' C: \_ Windows \_ sysWOW64 'isiqondisi.
Kungani i-MSVCR71.DLL ilahlekile kukhompyutha yami?
- I-Microsoft Community MSVCR71.dll ayitholakali. Uma ngichofoza kuhlelo ukuze ngisebenze, ngithola iphutha lesistimu 'Uhlelo alukwazi ukuqala ngoba i-MSVCR71.dll ayikho ekhompyutheni yakho. Zama ukufaka uhlelo kabusha ukulungisa le nkinga. '
Kungani sidinga i-msvcr.dll ku-Visual C + +?
Ezinye izinhlelo zokusebenza zingadinga izinguqulo ezibuyekeziwe ze-Visual C ++ Redistributable efana ne-2010 SP1 noma i-2012 Update 4. I-DLL isiza abadali bohlelo lokusebenza ukuthi baphinde basebenzise kahle izinto ezijwayelekile ezenza uhlelo lusebenze. Esikhundleni sokuvuselela isondo nokuqhaqhaza ikhodi yabo isikhathi ngasinye, abathuthukisi bangasebenzisa kabusha imitapo yolwazi ku-MSVCR.dll.
Ungayilungisa kanjani i-DLL engekho ku-Windows 10?
Ngalokhu, iKlayenti le-DLL-Files kungaba yithuluzi elisebenza kahle neliphephe kakhulu ukulungisa iphutha le-Windows 10 le-MSVCR71.dll. Izokusesha ngokuzenzakalela futhi ikufake i-MSVCR71.dll. 1. Landa, ufake futhi usebenzise iKlayenti le-DLL-FILES ku-Windows 10. 2. Bese ebhokisini lokusesha, thayipha ku-MSVCR71.dll bese uqala ukusesha ifayela le-DLL.
Ikuphi i-DLL elahlekile ku-Visual C + + ephinda ibuyiselwe?
Uma uyithola, ikopishele kufolda engu-C: WindowsSysWOW64. Lokhu kuxazulule inkinga kimi. Uma ungayitholi i-DLL elahlekile kweminye imishini, ngincoma ukufaka (noma ukufaka kabusha) inguqulo efanelekile ye-Visual C ++ Redistributable.